GhostCoin စျေး - အွန်လိုင်း GHC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို GhostCoin (GHC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ GhostCoin (GHC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ GhostCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ GhostCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
GhostCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
GhostCoinGHC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0235GhostCoinGHC သို့ ယူရိုEUR€0.02GhostCoinGHC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.018GhostCoinGHC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0215GhostCoinGHC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.212GhostCoinGHC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.149GhostCoinGHC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.524GhostCoinGHC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0882GhostCoinGHC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0313GhostCoinGHC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0329GhostCoinGHC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.526GhostCoinGHC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.182GhostCoinGHC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.126GhostCoinGHC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.75GhostCoinGHC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.3.97GhostCoinGHC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0322GhostCoinGHC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0358GhostCoinGHC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.73GhostCoinGHC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.163GhostCoinGHC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2.5GhostCoinGHC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩27.81GhostCoinGHC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦9.11GhostCoinGHC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.72GhostCoinGHC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.65
GhostCoinGHC သို့ BitcoinBTC0.000002 GhostCoinGHC သို့ EthereumETH0.00006 GhostCoinGHC သို့ LitecoinLTC0.000438 GhostCoinGHC သို့ DigitalCashDASH0.000271 GhostCoinGHC သို့ MoneroXMR0.000273 GhostCoinGHC သို့ NxtNXT1.92 GhostCoinGHC သို့ Ethereum ClassicETC0.00352 GhostCoinGHC သို့ DogecoinDOGE7.1 GhostCoinGHC သို့ ZCashZEC0.000293 GhostCoinGHC သို့ BitsharesBTS0.924 GhostCoinGHC သို့ DigiByteDGB0.779 GhostCoinGHC သို့ RippleXRP0.0845 GhostCoinGHC သို့ BitcoinDarkBTCD0.000824 GhostCoinGHC သို့ PeerCoinPPC0.0787 GhostCoinGHC သို့ CraigsCoinCRAIG10.89 GhostCoinGHC သို့ BitstakeXBS1.02 GhostCoinGHC သို့ PayCoinXPY0.417 GhostCoinGHC သို့ ProsperCoinPRC3 GhostCoinGHC သို့ YbCoinYBC0.00001 GhostCoinGHC သို့ DarkKushDANK7.67 GhostCoinGHC သို့ GiveCoinGIVE51.75 GhostCoinGHC သို့ KoboCoinKOBO5.45 GhostCoinGHC သို့ DarkTokenDT0.0216 GhostCoinGHC သို့ CETUS CoinCETI68.99